Date My Pet » Ugly Chokwadi About Modern Dating
Ugly Chokwadi About Modern Dating
Last updated: Oct. 23 2020 | 2 Maminitsi verenga
Ngatimbotaurei zvazviri, hatichafaniri kugara zvakanaka ol’ mazuva apo rudo pakutanga kuona kukava yokudanana izvo zvakaita kuti afare, muchato refu. With nokufambira mberi kwemichina, kutya kuzvipira, uye yakakwirira mwero kusavimbika, kufambidzana ano hakusi nyore. Uye nokuda vakazvarirwa mukupera kwezana remakore rechi20, isu kunyanya kuziva kuoma kwazvainge kudanana kunogona kuva.
Munhu ane hanya zvishoma ane zvose simba vari ukama uye hapana anoda kuva ane zvimwe kufarira nokuti anongova zvakare pangozi. Nekuti hatidi kuti kuonekwa zvakare vanoda, Tinowanzova kutora maawa kana dzimwe nguva kwemazuva kuti mameseji shure. mupfungwa mitambo izvi hazvisi kunakidza kuti munhu.
Foni vari kufa unyanzvi chimiro. kutaurirana vakawanda mazuva ano zvinoitika kuburikidza mameseji riri chaizvoizvo zvikuru rekuremekedza yokukurukurirana.
Kuronga mberi uye kuisa misi ruchigona kumboitika. Nemhaka evanhu vezvenhau, zvimwe kudanana zvido, neshamwari, misi sevanonyanya pakarepo pane achifunga aronga.
mashoko akafanana “ngationei chill” uye “vanoda kutamba” ndivo Bumbiro nokuti “ngationei zvepabonde”. Uye apo vakawanda kutya kuwana mashoko aya, ndivo kazhinji zvikuru nzira yakakurumbira kukoka munhu kupedza nguva mazuva iwayo.
Vamwe vanhu vasiri kutsvaga ukama, vanongoda zvepabonde. Zvinosuruvarisa, vakawanda nguva ino haisi akati kusvikira mushure chokwadi. mazuvano, chokwadi ari chaizvo kashoma kushandiswa.
Vanhu vazhinji vari kutya kuzvipira iyo inosvitsa “Tiri kungotaura” ukama. Haangorina ichi Blur mitsetse, Ukama izvi vanowanzoona kumbobvira vokupedzisira. -Chitaridzi vakasununguka izvi ukama kazhinji vanoguma mumwe munhu nokunyengedza asi sezvo ukama kumbova pamutemo ipapo nokunyengedza “tambotaura chakaitika”.
Social vezvenhau izere nemiedzo mikana kutsauka. Zvechokwadi Private mashoko anokunyengedzera kworudo zvakadai vade mufananidzo kunowedzera mikana yokuti kubirira. Social vezvenhau inoratidzawo kusarudza kuona ndiani mumwe ari kunze uko, hazvisisirizve chete nzira yokuti vanogara nemhuri uye neshamwari. Social Media rinoshandiswawo kutaura manzwiro. Status inogadziridza ndokuisa mifananidzo nezvorudo, apo kwete kutaura iwe zvakananga, ndiyo nzira itsva dzokunyora ndivo’ manzwiro vechokwadi.
Zvinosuruvarisa, Mazuvano zvakaoma chaizvo kuona mumwe munhu zvachose unfiltered. nyanya, vanhu vari kutya kuva zvechokwadi vakazvirongedza kunze uko kunyange muukama. Maonero aya nokuti unotya ndechekuti havadi kuti kuratidzei sezvo zvakare kuwanikwa, zvakare mwoyo, zvakare dorky, zvakare zvakanaka, zvakare ngozi, kwete shamisa zvakakwana, nezvimwewo. Chii tose tinoda kuziva ndechokuti kana ukaona munhu akakodzera, ivo kuchabatanidza zvose zvinobatanidzwa imi.
Pakupedzisira, munhu kuti kuwana kudanana naye achaita kana anopedzisira ava hwako naye kana pakupedzisira uchava kuputsa – vaviri chaizvoizvo idzi dzinotyisa. Nepo kufambidzana ano hakusi nyore, zvinokosha pakupedzisira. Nokuti kana tiri kuita kuti rinokosha munhu, Tinowanzova kukoshesa vose kunyanya sezvo rwendo yokuwana rudo rwechokwadi nguva dzose zviripo.
Five Online Dating Profile Blunders To Dzivisa
Sei akareba Girls Zvokupfimbana Shorter Guys